उच्च मैदानका लागि प्रार्थना पोइन्टहरू प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना पोइन्ट्स उच्च मैदानका लागि प्रार्थना पोइन्टहरू
आज हामी उच्च मैदानको लागि प्रार्थना बिन्दुहरूको साथ व्यवहार गर्ने छौं।
उच्च मैदान भनेको उच्च स्तर वा स्थितिमा परिवर्तन गर्नु हो। उच्च भूमिलाई विशेष बिन्दुबाट माथिल्लो बिन्दुको प्राप्तिमा सार्नका लागि देख्न सकिन्छ।
उच्च मैदान अन्यथा नयाँ स्तर भन्न सकिन्छ। उच्च मैदान विभिन्न रूपहरूमा आउन सक्छ। काममा यो पदोन्नती हुन सक्छ, तलब वृद्धि, एक सम्झौता जित्ने आदि। स्कूल मा यो एक उच्च ग्रेड पोइन्ट (जीपी) प्राप्त गर्न सक्छ, एक रक्षा जीत, स्नातक आदि। आध्यात्मिक रूपमा यो एक उच्च आयाममा परिवर्तन हुन सक्छ, सक्षम हुनु भगवानलाई स्पष्टसंग सुन्नुहोस्, आदि
हाम्रो जीवनको हरेक बिन्दुमा, हामी सबै नयाँ काम गर्दछौं विशेष गरी हाम्रो काम, वित्त र शिक्षामा।
कोही पनि स्थिर वा सुस्त हुन मनपराउँदैनन्, स्थिर पानीले लामखुट्टे पाल्ने क्रममा हामी सबैले माथि बढ्न चाहान्छौं जस्तो देखिन्छ यो सजिलो छैन जस्तो देखिन्छ।
हामी हाम्रो लोकप्रिय क्रिश्चियन भजनमा एक प्रदर्शनी हुनेछ जुन उच्च भूमिको बारेमा कुरा गर्दछ
म माथिल्लो दिशामा थिच्दै छु
नयाँ हाइटहरू म हरेक दिन प्राप्त गर्दैछु;
अझै अगाडि बढ्दै जाँदा प्रार्थना गर्दै,
“हे प्रभु, मेरो खुट्टा उच्च भूमिमा रोप्नुहोस्।”
प्रभु, मलाई उठाउनुहोस् र मलाई खडा गर्नुहोस्
कनानको टेबलल्याण्डमा विश्वास गरेर;
मैले फेला पारेको भन्दा उच्च विमान,
हे परमप्रभु, मेरा खुट्टाहरू भूईंमा रोप्नुहोस्।
रेखा १ - म माथिल्लो दिशामा थिच्दै छु
त्यहाँ "माथिल्लो मार्ग" भनेर चिनिने एक मार्ग छ, यो बाटो हो जुन परमेश्वरमा लिन्छ / जोड्दछ, किनकि उहाँ सबै शासकहरू भन्दा उच्चमा विराजमान हुनुहुन्छ।
एफिसी १:२१ अब उहाँ कुनै शासक, अख्तियार, शक्ति, नेता वा अन्य कुनै पनि कुरा भन्दा धेरै माथि हुनुहुन्छ - यस संसारमा मात्र होइन तर आउनेवाला संसारमा पनि।
माथितिर तर्फ तान्न को अर्थ प्रयास गर्नु हो र त्यहाँ पुग्न सबै लिन्छ (उच्च मैदान)।
लाइन २- नयाँ हाइटहरू म दैनिक प्राप्त गर्दैछु
प्रेसको लक्ष्य भनेको हरेक दिन नयाँ उचाइ प्राप्त गर्नु हो र स्थिर नहुनु हो। प्रत्येक दिन को लागी नयाँ चीजहरू प्राप्त गर्न नयाँपन प्रतिनिधित्व गर्दछ र आशा ल्याउँछ।
लाइन - म अगाडि बाउन्ड भएझैं प्रार्थना गर्दैछु
प्रार्थना एउटा विश्वासीको बानी हुनुपर्दछ। प्रार्थना उच्च स्थानहरू प्राप्त गर्नका लागि प्रमुख उपकरणहरूमध्येका एक हुन् किनभने परमेश्वर नै चीजहरू ठीक ठाउँमा राख्नुहुन्छ।
रेखा - हे प्रभु, मेरो खुट्टा उच्च भूमिमा रोप्नुहोस्
यो अनुरोधको प्रार्थना हो, यो स्वीकार गर्दैछ कि यो केवल एक परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले एक उच्च माथि उठाउन सक्नुहुन्छ।
लाइन 5-- प्रभु, मलाई उठाउनुहोस् र मलाई खडा गर्नुहोस्
यो पनि प्रभुलाई बिन्ती छ भने एक प्रार्थना हो। यो माथिल्लो ठाँउमा जानको लागि बिभिन्न चीज हो र त्यहाँ खडा हुनको लागि यो भिन्नै कुरा हो। केवल भगवान दुबै प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ।
लाइन ana - कनानको टेबलल्यान्डमा विश्वासद्वारा
२ कोरिन्थी:: We हामी विश्वासद्वारा हिंड्छौं, दृष्टिले होइन। हामी विश्वासी भएर परमेश्वरको वचनमा विश्वास र विश्वासद्वारा अघि बढ्न सक्छौं। कनान भूमि प्रतिज्ञा गरिएको भूमि हो, यो भूमि जुन दुध र मह बग्दछ।
रेखा 7- मैले फेला पारेको भन्दा एक उच्च उडान।
भगवानमा, त्यहाँ कुनै सीमा वा प्रतिबन्ध छैन। तपाईंले कल्पना वा कल्पना गर्न भन्दा बढि, भगवान तपाईंलाई त्यहाँ लैजान सक्नुहुन्छ।
एफिसी :3:२० 'अब उहाँसँग जो हाम्रो शक्ति अनुसार हामीले सोध्ने वा कल्पना गर्ने भन्दा बढि गर्न सक्दछ।'
यो उही अनुरोध यहाँ जोर जोर को लागी दोहोर्याईदै छ। एक व्यक्तिलाई माथि उठाउने काम केवल भगवानले गर्न सक्नुहुन्छ।
कसरी उच्च स्तरमा पुग्ने
गहिरो सोच्नुहोस्, ठूलो सोच्नुहोस्।
उथल चिन्तकले ठूलो उचाइ प्राप्त गर्न सक्दैन। हितोपदेश २:: '' मानिस हृदयमा सोच्दछ, त्यसैले ऊ हो '। तपाईं आफ्नो कल्पना भन्दा ठूलो वा ठूलो हुन सक्नुहुन्न।
यो गहिरो एक्लो सोच्न रोकिदैन, ठूलो सोच्नुहोस् !. आफैंले ठूलठूला कामहरू गरिरहेको कल्पना गर्नुहोस्, आफूलाई मनपर्ने उचाईमा चित्रण गर्नुहोस्। तपाईंको टाउकोमा कल्पना गर्नुहोस्, यस तिर कार्य गर्दछ र बिस्तारै तपाईं यसलाई ठीक बाहिर देख्नुहुनेछ।
सल्लाहकार र रोल मोडेल छ।
तपाईका सल्लाहकारहरू को हुन्, तपाईतिर को हेर्दै हुनुहुन्छ, कसले तपाईंलाई प्रेरणा दिन्छन्, तपाईंलाई कसलाई प्रेरित गर्छन्?
हामीलाई सिकाउन र सहि ट्र्याकमा राख्न हामी सबैलाई आफू भन्दा माथि कोही चाहिन्छ।
एक सल्लाहकार वा रोल मोडल हुनु तपाईंलाई उच्चमा जान प्रेरित गर्दछ।
तपाईंको लागि योजनाहरू सेट गर्नुहोस्, तपाईंको छोटो र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू लेख्नुहोस्, तपाईंको दृष्टि / सपना लेख्नुहोस्।
यसले तपाइँको तपाइँको प्रगति र उपलब्धीको स्तर चिन्ह लगाउन मद्दत गर्दछ वा अन्यथा।
त्यहाँ प्रार्थना बाहिर केहि छैन, प्रार्थना गर्न सक्दैन केहि छैन। कुनै पनि चीजको बारेमा प्रार्थना गर्नुहोस् र सबै कुराको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। सबै राम्रो चीजको लागि प्रार्थनाको आवश्यक पर्दछ र हरेक नराम्रो कुरालाई प्रार्थनाको आवश्यक पर्दछ।
प्रार्थना गुरु कुञ्जी हो। प्रार्थनाले हामीलाई उच्च मैदानमा लैजान सक्छ।
एक उच्च मैदान को लागी प्रार्थना अंक
पिता, म तपाईंलाई यस नाम मा धन्यबाद, तपाईं येशूको नाम मा उच्च हुन।
प्रभु म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईंले मलाई येशूको नाममा अर्को तहमा लैजानुहोस्
मलाई येशूको नाममा उच्च लिनुहोस्।
मेरो उच्च भूमि फादरको हरेक अवरोध / अवरोधले यसलाई लिन्छ।
येशूले मेरा खुट्टा भूइँमा रोप्नुभयो।
मलाई दैनिक नयाँ आधारहरू प्राप्त गर्न सहयोग गर्नुहोस्।
मेरो जीवन बाट स्थिरता ओह येशु।
मलाई घाँसबाट येशूको नाममा अनुग्रहमा जान सहयोग गर्नुहोस्।
येशूको नाममा मलाई माथि उठाउनुहोस्।
म येशूको नाममा मेरो जीवनको हरेक क्षेत्रमा उत्पादक हुनेछ।
मैले आफ्नो हातमा राखेका प्रत्येक चीज अबदेखि सफल हुनेछन्।
अबदेखि म येशूको नाममा बन्द स्वर्ग अन्तर्गत अपरेट गर्न अस्वीकार गर्दछु।
म येशूको नाममा श्राप बाहिर पछाडि धन्य हुँ।
म डिक्री गर्दछु, दयालुता र दयाले मेरो जीवनको सबै दिनहरू पछ्याउँदछ।
म येशूको नाममा अत्यधिक मन पराउँछु।
बुबा प्रभु मलाई येशू को नाम मा मेरो भाग्य सहयोगीहरु संग कनेक्ट।
मँ सबै कुरा ख्रीष्टको मार्फत गर्न सक्छु जसले मलाई बलियो पार्नुहुन्छ, तपाई मेरो जीवनमा येशूको नाममा अभिव्यक्ति पाउनुहुनेछ।
मेरो तट प्रभु येशू लाई बढाउनुहोस्।
मेरो नाम येशूको नाममा मेरो समझ भन्दा बाहिरको क्षेत्र विस्तार गर्नुहोस्।
म येशूको नाममा महानताको लागि चिन्हित छु
म येशूको नाममा ठूलो महिमा गर्न एक विस्फोटक गति को लागि प्रार्थना गर्दछु।
उत्तर दिएका प्रार्थनाको लागि धन्यबाद, येशू येशूको नाममा म प्रार्थना गर्छु। आमेन।
अघिल्लो लेखमानयाँ सुरुवातका लागि प्रार्थना पोइन्टहरू
अर्को लेखमाबच्चाहरूको उद्धारको लागि प्रार्थना
लागूपदार्थको दुर्व्यसनको लागि प्रार्थना